ANTSIRANANA - FISOTROANA TOAKA : Tovolahy roa maty voatsatok’antsy
Tovolahy roa no maty vokatry ny fifamaliana tamin’ny trano fisotroan-toaka iray tao Scama taty Antsiranana. Araka ny vaovao voaray dia niara-nisotro toaka ireo tovolahy nanao andiany ireo, ka niafara tamin’ny tsatok’antsy. 24 janvier 2018
Tsy fantatra mazava tsara ny antony nahatonga ny fifanjevoana.Teo ivelan’ity toeram-pisotroana ity vao raikitra ny fifampitsatohana antsy. Ny iray hafa izay niezaka nanasaraka ireo niady dia voatora-bato tandrify ny taola-masony. Ny roa hafa voatoboko ny meso ireo dia samy nentina haingana tao amin’ny hopitaly manara-penitra ny iray ary ny iray hafa tao amin’ny hopitaly miaramila. Ny sabotsy alina hifoha alahady no nitrangan’izany.
Ny marainan’ny alahady re fa maty ny iray, izay avy ao amin’ny fokontany Ambalavola. Ny iray nalefa nanaraka fitsaboana tao amin’ny hopitaly miaramila kosa indray dia ny alin’ny alatsinainy hifoka ny talata 23 janoary no maty na dia teo aza ny ezaka natao. Hatreto dia mbola tsy voasambotra ilay zalahy nahavanon-doza, izay voalaza fa monina ao Morafeno Ambalakazaha.
Mbola ao anatin’ny fikarohana ity farany ny mpitandro filaminana. Mba hahazoam-baovao mahakasika ny zava-nitranga dia voatery notazomin’ny mpitandro filaminana ilay zalahy nanasaraka ireo niady, izay fantatra fa nanatri-maso ny zava-niseho. Efa misokatra ny fanadihadihana mahakasika ity raharaha vono olona ity. Araka ny fanampim-baovao hatrany dia efa mpamerina heloka ity nahavanon-doza ity, izay karohina fatratra. Tahaka izany ihany koa ny iray tamin’ireo maty ireo, avy ao Manongalaza ity. Azo ambara araka izany fa efa mpanao azy ireto nifampitsatoka antsy ireto fa lasa nifamono izy samy izy.
Ny mampametra-panontaniana ny mpanara-baovao dia efa samy nanana antsy avokoa ny andaniny sy ny ankilany ka nifampitomboko meso izao. Heverin’ny maro araka izany fa ny olon-dratsy no tsy afa- misaraka antsy tahaka izany. Na izany aza anefa dia voararan’ny lalana ny famonoana olona ka mbola karohina mafy ilay nahavanon-doza.
Voaantso teny amin’ny biraon’ny Polisy tetsy Tsaralalàna indray CLEMENCE RAHARINIRINA (2484) 5 mars 2021 Namoahana “Filazana Fikarohana” i Marco Randrianisa FIANTSOANA “ACTE ISOLÉS” (912) 2 mars 2021 Tsy hiara-dalana amin-dRavalomanana intsony ? FANAMBARAN’NY ANTOKO MFM (213) 2 mars 2021 Mikononkonona fanakorontanana ireo vehivavy RMDM ? HETSIKY NY VEHIVAVY 8 MARSA ANY DIEGO (114) 2 mars 2021 Jiolahy naman’i Del kely miisa fito voasambotra KIDNAPPING TAO AMBAKIRENY (110) 2 mars 2021 Voasoroka ny korontana nokasain’ ny RMDM hatao ANALAKELY - AMBOHIJATOVO (97) 2 mars 2021